Doula waxay bixisaa taageero niyadeed, jireed, ruuxi ah inta lagu gudajiro / ka dib ilmo soo rididda
FCHC waxay ku faraxsan tahay inay awood u yeelato inay ballaariso adeegyadeenna gaarka ah, ee naxariista leh si joogto ah diiradda loogu saaro khibradaha shaqsiyeed ee bukaan kasta oo aan ugu adeegno iyada oo loo marayo u doodista Doula.
Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Falls Church waxay ahayd tii ugu horreysay ee ku taal Virginia haddana waxay ka mid tahay saddexda kaliya ee ku yaal aagga nawaaxiga magaalada DC adeegyada do-pro-doorashada bukaannadeena.
Mahadnaq adeegyada doula waxaa bixiya DC Doulas ee Xulista Xulashada.
An Ilmo iska soo ridid Doula waa shaqsi tababbaran oo wax bixiya taageero shucuureed, jireed, ruuxeed, iyo macluumaad inta lagu guda jiro iyo kadib soo ridida ama luminta uurka kadib.
Adeegyada Doula waxaa bixiya DC Doulas for Choice Collective, oo xubnahooda lagu tababaro dhinacyada caafimaadka ee daryeelka ilmo soo rididda iyo caafimaadka taranka oo ay weheliso wacyigelinta kala duwanaanta, xirfadda iyo anshaxa, iyo farsamooyinka taageerada ruuxiga ah iyo jir ahaaneed.
Si fudud noo soo sheeg inaad jeclaan lahayd in Doula ay qayb ka noqoto daryeelkaaga annaga.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Wadajirka iyo tabaruceyaasha, fadlan booqo: DC Doulas ee Xulista Xulashada